भारतीय बाउका छोरा पैसा तिरेर यसरी बने वंशज नेपाली नागरिक…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
धनुषा : एक भारतीय नागरिकले पैसाकाे चलखेलमा वंशज नागरि’कता बनाउन सफल भएका छन् । जनकपुरमा एक परिवार छन्, जो मूलतः भारतीय नागरिक नै हुन् । तर परिवारका एक सदस्यले धनुषाबाट पैसाकै बलमा वंशज नागरिकता प्राप्त गरेका छन् ।
नागरिकता पाउने व्यक्तिको बुवा भने भारतीय नागरिक रहेका छन् । तर छोरा भने नेपाली नागरिक, त्याे पनि वंशज’का अाधारमा । भारतको सीतामढी जिल्ला बस्ने एकजना भारतीय नागरिकले पैसा ख’र्च गरेर वंश’ज नागरिकता बनाएको र’हस्य बाहिरिएको हाे । सीताम’ढीस्थित कुम्माका स्थायी वा’सिन्दा रोशनकुमार ठाकुरले धनुषाबाट वं’शजका आधारमा नागरिकता बनाएका हुन् ।
बाबु त्रि’वेणी ठाकुरसँग नेपाली नागरि’कता नरहे पनि छोरो रोशनसँग भने नेपाली वं’शज नागरि’कता रहेको छ । रोशनले ४० हजार ख’र्चेर जिल्ला प्र’शासन कार्यालयका कर्म’चारीको सहयोगमा वंशज नागरिकता बनाएको उनका आफ्नै भाइ रमेश ठाकुरले दा’बी गरेका छन् । रोशनले दुई वर्षपहिले पैसा ख’र्चेर नेपाली नागरिकता बनाएको रमेशले बताएका छन् ।
बाबुसँग नेपाली नागरिकताकाे प्रमाण-पत्र नरहे पनि दाइ रोशनले वं’शज नागरिकता बनाएको रमेशको भनाइ छ ।
रोशनसँग रहेको नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जारी भएको छ । भाइ रमेशका अनुसार साढे दुई वर्षअघि मात्र नागरिकता प्रमाण-पत्र बनाए पनि जा’री मिति भने २०६४/३/६ भनिएको छ । अ’र्थात् करिब १० वर्षअघि नै जारी गरिएकाे देखाइएकाे छ ।
प्रशासकीय अधि’कृत विनोदकुमार दहालको हस्ताक्षर भनिएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा त्रिवेणी ठाकुरका छोरा रोशनलाई जनकपुर- ४ का स्थायी वासिन्दा भनिएको छ ।
रमेश बाबु त्रि’वेणीको भारतीय पहि’चान-पत्र देखाउँदै प्रश्न गर्छन्, ‘बाबुले नेपाली नागरिकता नपाइकन छोराले कसरी वंशजको नागरिकता पाउन सक्दछ? यदि रोशनले लिएको नागरिकता फ’र्जी होइन भने बाबुको ना’गरिकता देखाइदिनु प¥यो ।’
परिवारसँगै जनकपुरमा बस्दै आइरहेका रोशन र रमेशराज मिस्त्रीको काम गर्दै आइरहेका छन् । लामो समयदेखि जनकपुरमा बस्दै आइरहे पनि बाबुले नागरिकता लि’नतर्फ कहिल्यै चासो नदेखाएको रमेशको भनाइ छ । बाबु साधु हुनुहुन्छ, उहाँले ना’गरिकता लिनेबारे कहिल्यै चासो देखाउनुभएन् रमेश भन्छन् ।
दाइले ४० हजार खर्चे’र नागरिकता बनाउन लागेको कुरा गरेका थिए । तर, बाबुले चासो देखाउनु भएन ।’ बाबुकै नागरिकता नरहेपछि छोराले बनाएको नागरिकता स्वतः फ’र्जी हुने रमेशको दाबी छ । रोशनले सोही नागरिकताको आधारमा मोटरसाइकलसमेत खरि’द गरेको उनको भनाइ छ ।News24 Nepal
Prevविद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्न ऊर्जामन्त्रीसँग माग ! सहि या गलत आफ्नो धारणा राख्नुहोला ।
Nextओलि पक्षबाट प्रचण्डलाई ह टाउने यस्तो आ न्तरिक गृ हकार्य हुँदै…हेर्नुहोस।